Muxuu ja yiri Jordi Alba go’aankii ay maamulka Barcelona ku taageereen in kulanka Girona lagu ciyaaro magaalada Miami? – Gool FM
Muxuu ja yiri Jordi Alba go’aankii ay maamulka Barcelona ku taageereen in kulanka Girona lagu ciyaaro magaalada Miami?
Dajiye September 15, 2018
(Barcelona) 15 Sab 2018. Difaaca kooxda Barcelona ee Jordi Alba ayaa muujiyay fikirkiisa kaga aadan in kulanka Catalan Derby lagu ciyaarayo magaalada Miami ee dalka Mareykanka.
Jordi Alba ayaa si weyn kaga soo hor jeestay go’aanka ay maamulka kooxda Barcelona ku taageereen fikirka lagu ciyaarayo magaalada Miami ee dalka Mareykanka kulanka Catalan Derby, isagoo sheegay in safarku uu ku dheeraan doono jamaahiirta.
“Mar walba waan ku dhibtoonaa Anoeta Stadium, laakiin guul weyn ayaan halkan ku gaarnay, qeybtii hore waxa ay aheyd mid caadi ah, waxaa inaga dhashay gool”.
“Qeybta labaad waxaan ku qasbaneen inaan gool dhalino, waxayna ahayd inaan la nimaadno 2 gool”.
“Inaan kula ciyaarno Girona magaalada Miami ee dalka Mareykanka, waa go’aanka maamulka, laakiin kooxda ma aysan nagala hadlin go’aankan, waxaa laga yaabaa inay kala hadleen kabtanka kooxda, laakiin kama been sheegayo waa safar dheer. Jamaahiirta Girona waxay jecel yihiin inay ku ciyaaraan garoonkooda”.
Firmino oo markii ugu horeesay ka hadlay kadib dhaawacii darnaa ee kasoo gaaray isha kulankii Tottenham
Romelu Lukaku oo ka hadlay guushii ay ka gaareen kooxda Watford